Saron'ny lafarinina sy ronono hiadiana amin'ny mony | Nutri Diet
Ny vokatra hatsaran-tarehy novidiana tao amin'ny magazay lehibe dia tsy nifanaraka tamin'ny filan'ny hoditra amin'ny rafitra epidermaly samihafa. Ireo fomba fahandro taloha an'ny saron-tava homemade ampiasain'ny renibenay dia ampy im-betsaka hitsaboana ny siny hoditra marefo. Ny fampifangaroana ny ronono sy ny lafarinina dia fomba fahandro saron-tava mety indrindra hiadiana amin'ny mony sy ny hoditra marefo.
1 Saron-tava an-trano ho an'ny hoditra marefo misy mony
Saron-tava an-trano ho an'ny hoditra marefo misy mony
Ny hoditra misy refin- hoditra mazàna izy ireo matetika. Tena hita tokoa fa ny hoditra marefo dia mizaka ny mony noho ny fahalemeny. IRETO epiderme Ireo matevina dia iharan'ny fanafihana sebum maharitra. Malemy kokoa ny hoditra misy menaka, ka mamokatra sebum be loatra noho ny karazan-koditra hafa, mba hiarovany tena amin'ireo herisetra ivelany sy fahasimbana. fahampian-drano. Ny valiny dia ny fitambaran'ny tavy izay mitarika amin'ny fivelaran'ny mason-koditra, ny fisehoan'ny komandy sy ny mony, hoditra mamiratra maharitra.
La lafarinina sy ronono dia singa iray amin'ny fomba fahandro namboarina atolotray ho fanafody hiadiana amin'ny mony ary manaja ny firafitry ny hoditra malemy miaraka amin'ny olana.
Lafarinina roa tablespoons,
Ronono 2 sotro fihinanana.
Kafe roa tablespoons no mifangaro koba tsara toto miaraka amin'ny sotro fihinanana 2 an'ny ronono mandra-pahazoana paty malama. Ahosotra amin'ny tarehy ny fikarakarana ary avela hiala sasatra mandra-pahamainin'ny saron-tava ary lasa mafy. Ity fomba fahandro ity dia azo ampiasaina ho madio isan'andro. Ampy ny manisy ny fangaro isa-maraina raha toa ka savony mahazatra hanadio ny tarehy.
La koba tsara toto mihetsika toy ny tanimanga amin'ny voa. Manary pimples nefa tsy manimba ny hoditra ary mitroka sebum be loatra mba hanamaivana ny lokon'ny tarehy. Ireto toetra tsara manalefaka ireto dia mety amin'ny fanarenana ny hoditry ny zaza. Ny koba dia manana fananana antsoina hoe antifungal izay manampy amin'ny ady amin'ny aretina isan-karazany ao an-toerana, toy ny fisehoan'ny mony.
Tsy dia mahery setra noho tanimanga, ny lafarinina no singa mety indrindra amin'ny hoditra marefo ary dehydrated. Ny ronono koa malefaka be amin'ny hoditra. Ity sarontava miady amin'ny mony vita an-trano ity dia mety indrindra siny hoditra marefo ary voajanahary tanteraka koa io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » fahasalamana » soso-kevitra » Saron-tavy sy ronono hiadiana amin'ny mony